SACIID ADAN MOHAMED (SACIID SUUJINO) OO MARTI QAAD KA HELAY SANADKAAN JAALIYADAHA SPORTIGA SOOMAALIYEED. | somalisc
03/27/2017 Uncategorized No comments
SACIID ADAN MOHAMED (SACIID SUUJINO) OO MARTI QAAD KA HELAY SANADKAAN JAALIYADAHA SPORTIGA SOOMAALIYEED.
Suxufiga Sportiga Soomaaliyeed Mr Saciid Suujinno oo bahda sportiga ay aad u jecel yihiin ayaa marti qaad ka helay Jaalliyadaha kala ah Finland, Sweden, Kanada, United Kingdom, Holland iyo America.
Mr Saciid Suujino ayaa khadka taleefoonka ku waraystay maanta somalisc.com, waraysigiina wuxuu u dhacay sidan:
Somalisc: Saciid waxaan ku weyddiinayaa saxaafadda aad iyo aad ayey u ballaaran tahay maxaad ku dooratay qaybta sportiga?
Saciid Suujino: Runtii somalisc.com waxaan idinka mahad celinayaa casuumadda aad igu casuunteen websitekiina. Midda kale anigu sportiga waxaan bilaabay anigoo caruur ah ilaa iyo haddana ku dhex jira. Maaddaama aan soo ciyaaray kubadda cagta, koleyga, kubadda miiska iyo midda laliska ayaan waxaan doorbiday in aan noqdo Suxufi Sport.
Somalisc.com: Saciid Suujino maaddaama aad noo sheegtay in aad tahay ehel Sport, sidee ayey suurtagal kuugu noqotay in taageerayaal fara badan aad ku yeelato waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba?
Saciid Suujino: Runtii marba haddii aad tahay Suxufi waxaa wanaagsan in aad la saaxiibto bulshada. In aad iska ilaaliso waxyaalaha kuu keeni kara Sumcad xumada. Aniga taa waxaa ii sii dheer in aan bulshada kii xanaaqsan in aan ka qosliyo, kii I neceb in aan isjeclasiyo, dadka oo dhanna ay ii wada Siman yihiin.
Somalisc.com: Waxaa nagu maqaal ah in sanadkan dhawr jaaliyadood sport ay ku casuumeen maxaa ka jira wararkaasi?
Saciid Suujino: Waa run Sanadkan waxaa jiri doona dhawr ciyaarood, waxaa ugu horeeya dalka Finland oo aan noqday Saxafiga keliya ee laga casuumay. Taasina waxaan uga mahad celinayaa guddiga qabanqaabada cayaaraha Old Boys, gaar ahaan Guddoomiye Qooje.
Waxaa kaloo laygu casuumay Qori tuurka SEUKI, runtii aan dhihi karo waa tartan ay aad u jecel yihiin umadda Soomaliyeed. Martiqaadka ay ii fidiyeen Jaalliyadda Sweden waan uga mahad celinayaa gaar ahaan Guddoomiye Weli Maalin. Reer Sweden waxaan leeyahay sanadkaan waxaad nasiib u yeelateen majaajaladii Saciid Suujino, Aftahanimadii Saciid iyo …..iyo …..adinka lee ku dara.
Somalisc.com: Saciid sanadkan WEBSITEKA somalisc.com waxay iman doonaan Tartanka Sweden ee xagaaga, maaddaama aad tahay Suxufi Sport maxaad kula dardarmi lahayd WEBKA?
Saciid Suujino: Marka hore waxaan idinka mahad celinayaa hawsha aad umadda u haysaan. Midda kale waa in aad badisaan wacyi gelinta sportiga maaddaama ay nagu yar yihiin cayaartoy tayo leh oo dunida guudkeeda ka ciyaara. Waxaad kaloo ku dadaashaan meel walba oo sport Soomaaliyeed ka jira in aad booqataan oo dhiiri gelisaan.
Somalisc.com: Adigoo ka faaiidaysanaya fursadan maxaad ku soo gabagabayn lahayd hadalkaaga?
Saciid Suujino: WAXAAN halkan ka salaamayaa dhammaan bahda sportiga meel walba ay joogaan. Tan labaad waxaan mahad gaar ah u dirayaa dhammaan Jaalliyadaha igu casuumay tartamada ay qabanayaan sida dalka Ingiriiska, Holand, Kanada, Sweden, America iyo Dalka Finland oo bisha April aan tegi doono.
ISDUUBNI AYAAN IDINKULA DARDAARMAYAA.
© 2017 somalisc
Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 7477829 bytes) in /home/content/91/10019591/html/wp-includes/wp-db.php on line 1173